Roll akpa Factory - China Roll akpa Manufacturers, Suppliers
A ụba Metal Security lọjistik waya ntupu Roll onu
Nke a adaba na mgbanwe 3 kwadoro akwu “A” ụba ụba mpịakọta pallet na-ezo aka A etiti mpịakọta onu trolley ma ọ bụ Logistic waya ntupu mpịakọta onu trolley, zuru okè maka ibufe nnukwu nchịkọta, igbe na ndị ọzọ na nnukwu ngwongwo. Ọ na-enye ohere ịchekwa ohere nke inwe ike ịkwatu ngwa ngwa maka nchekwa mgbe anaghị eji ya.
Oké ọrụ mpịakọta onu Trolley n'ihi na ihe onwunwe njem na nchekwa （3 kwadoro）
Nke a adaba na mgbanwe mpịakọta onu Trolley na-akpọ mpịakọta akpa trolley na bụ zuru okè n'ihi na ibufe nnukwu nchịkọta, igbe na ndị ọzọ na nnukwu ngwongwo. Ọ na-wuru nke galvanized ígwè akpa na nyiwe. Ọ na-enye ohere ịchekwa ohere nke inwe ike ịkwatu ngwa ngwa maka nchekwa mgbe anaghị eji ya.
Oké ọrụ mpịakọta onu Trolley maka ihe njem na nchekwa (4 n'akụkụ)
Nke a adaba na mgbanwe mpịakọta onu Trolley na-akpọ nkwakọba Trolley, ma ọ bụ inyefe nchekwa onu. O zuru oke maka ibuga nnukwu ngwugwu, igbe na ngwaahịa ndị ọzọ buru ibu.
Pallet tainer bụ usoro ihe eji eji nchekwa ihe eji echekwa ihe iji chekwaa ihe na pallets. Ọ bụ usoro siri ike maka ịkwakọ ngwaahịa iji zere ida nke usoro ahụ. Jiri ohere niile dị maka nchekwa maka pallet. Ọbụna ngwaahịa ndị na-enweghị atụ nwere ike ịdọrọ n'uko. Mgbe eji ya arụ ọrụ. Enwere ike ịgba akwụkwụ pallet iji chekwaa ebe nchekwa gị. Ọ bụ usoro nchekwa ọgbara ọhụrụ maka ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ nrụpụta, ebe ndị na-ere ahịa, yana ebe nchekwa na nkesa ndị ọzọ. Nke ahụ ga - abawanye nchekwa nchekwa nke ngwongwo echekwara ma ụgwọ ọrụ ga - belata.
Nrụgide ọrụ waya ntupu mpịakọta onu maka ihe onwunwe njem na nchekwa (4 kwadoro)
The oké ọrụ waya ntupu mpịakọta onu Trolley ọtụtụ ndị na-eji na nkwakọba na nnukwu Ahịa. Ọ bụ trolley a na-agagharị agagharị ma nwee ike ịpịgharịkọta ya na ndị casters anọ maka ibufe na ịchekwa ihe.
Ulo waya maka sistemụ pallet
A haziri ọdụ ụgbọ mmiri a dị arọ iji rụọ ọrụ na pallet na-emepụta ihe iji mepụta ebe nchekwa maka obere ihe. Ọ dị mfe ịwụnye na-etinye ya naanị na ogwe osisi na-enweghị idozi chọrọ.
Oké ọrụ mpịakọta onu Trolley maka ihe njem na nchekwa (4 shelves)
Foldable galvanized pallet ntupu igbe maka nkwakọba nchekwa
A na-eji igbe wiwi pallet mee wires dịkarịa ala na 5mm dayameta ma mee ya na foldable na stackable n'ụzọ dị mfe. A na-eji ya idozi ikike nkwakọba ihe, idiocha nchekwa na iji buru, ma melite irè itinye n'ọrụ nke ohere nchekwa.